मैले जिते ं भने आउने तलव, भत्ता विकासमा लगाउनेछु | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / मैले जिते ं भने आउने तलव, भत्ता विकासमा लगाउनेछु
Posted by: युगबोध in अन्तर्वार्ता November 28, 2017	0 341 Views
दाङ निर्वाचन क्षे त्र नं. १ प्रतिनिधि सभा सदस् यकँ उम्मे दवार
यही मंसिर २१ गते दो स्रो चरणको प्रतिनिधि सभा र प्रदे श सभाको निर्वाचन ह“ुदै छ । निर्वाचनको मिति नजिकिएपछि चुनावी प्रचार तीब्र भइरहे को छ । दाङ निर्वाचन क्षे त्र नं. १ प्रतिनिधि सभा सदस् यको निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनमो र्चाको तर्फवाट कपिलदे व खनाल चुनावी मै दानमा यही मंसिर २१ गते दो स्रो चरणको प्रतिनिधि सभा र प्रदे श सभाको निर्वाचन ह“ुदै छ । निर्वाचनको मिति नजिकिएपछि चुनावी प्रचार तीब्र भइरहे को छ । दाङ निर्वाचन क्षे त्र नं. १ प्रतिनिधि सभा सदस् यको निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनमो र्चाको तर्फवाट कपिलदे व खनाल चुनावी मै दानमा हुनुहुन्छ । शिक्षण पे शावाट रिटायर्ड हुनुभएका खनालले निर्वाचन जिते पछि आफूले पाउने तलव भत्तासमे त नलिने र त्यो रकम विकासमा खर्च गर्ने घो षणा गर्नुभएको छ । निर्वाचनलाई के न्द्रित गरे र युगबो धकर्मी दशरथ घिमिरे ले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षे प यहा“ प्रस् तुत गरिएको छ । –सम्पादक
चुनावी प्रचार कसरी भइरहे को छ ?
चुनावी अभियान प्रत्ये क गाउ“, टो ल वस् तीमा घरदै लो , को णसभालगायका कार्यक्रम गरे र के न्द्रित गरे का छौ ं । मतदाताको घरदै लो मा पुगे र चुनावी एजे ण्डा र राष्ट्रिय जनमो र्चाले उठाएका एजे ण्डाहरुका बारे मा जानकारी गराउने काम भइरहे को छ । सबै को घरदै लो मा पुग्ने को सिसमा छु । यो बे लामा पनि जनताको घरदै लो मा नपुग्दा जनगुनासो आउने भएकाले सकभर सबै का घरमा पुग्ने यो जनामा छु ।
जनताको उत्साह कस् तो पाउनुभएको छ ?
मै ले आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवमा विचार गर्दा आजसम्म हामीले चुनाव दियौ ं । धे रै मानिस अगाडि बढे  । निर्वाचित पनि भए । सरकार पनि बन्यो  । तर जनता सन्तुष्ट भएको मै ले पाइन । जनगुनासो के रह्यो भन्दा हामीले चुनाव त दियौ ं, सरकार पनि गठन भयो  । तर जनताले सो चे को अपे क्षा, राष्ट्रले चाहे को अपे क्षा पूरा नभएको , अझ यो राष्ट्र अलि कमजो र हो कि, यो दे शका जनतामा निराशा छाइरहे को मै ले पाइरहे को छु  ।
जनतामा निराशा छाएको कुरा गर्नुभयो  । त्यसको कारण चाहि“ के रहे छ ?
यो दे शका जर्जर समस् याहरु समाधान नभएको , चुनावअघि घरदै लो गाउ“घरमा आएर दिएको आश्वासन पूरा नभएको ह“ुदा जनतामा निराशा छाएको छ । सामान्य विकास पनि गाउ“घरमा बाटो घाटो रो डहरुको ब्यवस् था, सामान्य अस् पतालको समे त व्यवस् था नभएको , यो दे उखुरी क्षे त्रमा तीन लाख जनसंख्या हु“दाह“ुदै पनि हामीले सामान्य उपचारको लागि बुटवल, ने पालगञ्ज, काठमाडौ ं दौ डनुपर्ने अवस् था छ । राजनीतिक परिवर्तन भयो  । दे शमा गणतन्त्र आयो । तर त्यसको अनुभूति जनताले गर्न नपाएको हु“दा गुनासो बढे र गएको मै ले पाएको छु ।
तपाइ“ले जनतामाझ के एजे ण्डा राखिरहनु भएको छ ?
प्रतिबद्धता राखिरह“दा हाम्रो पार्टी बहुमत प्राप्त गरी सरकारमा नगएको अवस् था एउटा हो  । अर्काे कुरा के छ भने यो दे शमा जति सक्छौ ं त्यति विकास गछौर् ं भने र आफ्ना प्रतिबद्धता राखिरहे का छौ ं । हामीले धे रै कुराहरु, धे रै सपनाहरु बा“ड्ने गरे का छै नौ ं । ती सपनाहरु बा“डे र भो लिका दिनमा फे रि उस् तै के ही गर्नु भएन, सपना त धे रै दिनुभयो भन्ने आरो प जनताबाट नआओ स् भन्ने कुरामा सचे त हु“दै मुख्य गरी यो दे उखुरीको समग्र विकासको लागि यो जनाहरु अघि सारे को छु । त्यही एजे ण्डा मतदातामाझ लगे को छु । पहिलो एजे ण्डा दे उखुरीमा एउटा मे डिकल कले ज
अथवा सुविधासम्पन्न अस् पताल हुनुपर्छ । सामान्य किसानका छो राछो रीले पनि उपचार गर्न पाउनुपर्छ । अर्काे कुरा यहा“ प्राविधिक शिक्षालयको आवश्यकता छ । प्राविधिक उच्च शिक्षालय यहा“ नहु“दा तीन लाख जनताका छो राछो री पढ्नको लागि अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता छ । हाम्रो उर्वरभूमि भएको दे उखुरी, प्राकृतिक स्रो त साधनमा धनी भएको हाम्रो दे उखुरी, कृषकहरु बसे को यस दे उखुरी क्षे त्रमा मल, बीउ, कृषि औ जार, सिंचाईको सुविधा पु¥याउन हाम्रो तर्फबाट प्रयत्न गछौर् ं भने र जनतासमक्ष गएका छौ ं । आएको बजे टलाई सदुपयो ग गर्ने कार्यमा जनताको सहभागी बढाउन जरुरी छ ।
दे शमा बजे ट रहे छ, सम्पत्ति रहे छ भन्ने कुरा हामीले वुझे का छौ ं । दे शको बजे टलाई सदुपयो ग ग¥यौ ं भने पनि दे शको मुहार परिवर्तन हुन्छ भन्ने विश्वास राखे का छौ ं । दे शमा बढे को विकृति, विसंगतिको कुराहरु रो क्न सक्ने हामीले अर्काे विश्वास राखे का छौ ं । यो दे शलाई सद्भाव दिनुपर्छ । यो दे शका जात, जाति भाषाभाषीको बीचमा सद्भाव दिनुपर्छ । विकासमा लाग्नुपर्छ । ने ताको आश्वासनले मात्रै के ही हु“दै न, हामी सबै संलग्न हुनुपर्छ, जनसहभागिता हुनुपर्छ । त्यसकारण ने पाली जनतालाई प्रतिफल दिन सक्छौ ं ।
चुनावी प्रतिस् पर्धामा तपाई नया“ अनुहारको रुपमा हुनुहुन्छ । कसरी राजनीतिमा प्रवे श गर्नुभयो ?
मे रो जन्म प्युठान जिल्लाको साविक वांगे मरो ठ–७ सौ तामारे मा भएको हो  । विकट क्षे त्रमा जन्म भएको थियो  । निकै दुःख गरे र यहा“सम्म आउन सफल भएको छु । ३३ वर्ष दुर्गम जिल्लामा बसे र शिक्षण पे शा गरे को हु“ । मलाई यो घुस, भ्रष्टाचार भन्ने कुरा पनि थाहा छै न । विद्यालयमा नितान्त सरकारले दिएको तलव खाएर बसे को मान्छे हु“ । जनताले तिरे को करलाई दुरुपयो ग नगरौ ं भन्ने मे रो दृढ विश्वास छ । जनतामा विश्वास जगाउने अभियानमा छु । म राजनीतिमा २०३६ सालदे खि प्रवे श गरे को हु“ । विद्यार्थीकालमा अने रास् ववियु छै ठौ ंमा प्रवे श गरे को हु“ । सरहरुले कलास दिनुभयो श्रमको मूल्यबाट । म त्यस क्लासबाट अत्यन्त प्रभावित भए“ । हामीले शो षित पीडित पक्षको मुक्तिको लागि वर्गीय राजनीति गर्नुपर्छ । हामीले दबिएका मान्छे हरुको उठान गर्नुपर्छ भन्ने चे तनाको विकास राजनीतिबाट भएको हो  । तल्लो स् तरको मान्छे , दुःख गरे र अलि कति माथि उठे को मान्छे भएकाले मै ले दुःखलाई बुझे को छु । मुक्तिको लागि वर्गीय राजनीति गर्नुपर्छ ।
अब पू“जीवादी राजनीति ग¥यो भने पू“जीको नै संरक्षण, पू“जीपतिको संरक्षण र सत्कार गर्नुपर्छ भन्ने मै ले बुझे र एउटा आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ, गरिवको पक्षमा राजनीति हुनुपर्छ, दबिएका शो षित पीडितहरुको मुक्तिको लागि राजनीति हुनुपर्छ । अर्काे राष्ट्रियताको रक्षाका लागि राजनीति गर्नुपर्छ भने र म विद्यार्थीकालबाट राजनीतिमा आएको हु“ । २०४० सालदे खि म दुर्गममा गएर शिक्षण पे शामा संलग्न भए“ । त्यतिबे ला पनि अखिल ने पाल शिक्षक संघ भन्ने थियो  । भूमिगत थियो  । पछि फो रमको रुपमा हामी ने पाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनमा बसे र काम ग¥यौ ं । बीचमा आएर हाम्रो राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका साथीहरुले हामीलाई जिम्मे वारीमा नराख्ने , हामीहरुको आवाजलाई सम्बो धन नगर्ने गरिसके पछि हामीले २०५७ सालतिर आफ्नो यो जनालाई अघि बढाउन अखिल ने पाल शिक्षक संघ गठन गरे र अगाडि बढिरहे को अवस् था हो  । यसरी राजनीति गर्दै जा“दा मै ले दुर्गममा पनि अखिल ने पाल शिक्षक संघका जिल्ला कार्यसमिति गठन गर्न सफल भए“ । कर्णाली अञ्चलमा पनि काम गरे ं । अनि राष्ट्रिय जनमो र्चाको नजिक भएर काम गरे र अहिले राजनीतिमा लागे को छ भन्ने साथीहरुलेबुझे र मै ले टिकट पाएको छु ।
कसरी बदल्नुहुन्छ राजनीतिलाई ?
म वौ द्धिक क्षे त्रबाट राजनीतिमा आएको हुनाले शुद्ध गरिखाने वर्गको पक्षमा काम गर्छु । जनताको साथमा साथ, का“धमा का“ध मिलाएर हामी हि“ड्नुपर्छ । हामी जिते र गएपछि जनताको साथ छो ड्नुह“ुदै न् । जनाता भने को जनार्दन हुन् । जनताको से वा गर्नु, जनताई अगाडि बढाउनु, जनताको पिर मर्का र जनताको आवाजलाई अगाडि बढाउने भन्ने मा मात्रै मे रो ध्यान जाने छ ।
राष्ट्रिय जनमो र्चा संघीयता खारे जीको माग गर्दै आएको छ । तर तपाइ“हरु अहिले त त्यही संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहे को चुनावमा सहभागी हुनुभएको छ, किन ?
हामीले संघीयताको बिरो ध गरे का छौ ं । जातीय राज्यको बिरो ध गरे का थियौ ं । यो संघीयता भन्ने मै ले मे रो उमे र अहिले ६१ बाट ६२ मा लाग्यो  । कै यौ ं आन्दो लनमा सहभागी हु“दा संघीयता भन्ने शब्द सुने का थिएनौ ं । ०६३ सालको आन्दो लनपछि अन्तरिम संविधान ले खिसके पछि त्यो बीचमा ल्याएर फे रि मधे श आन्दो लनको उब्जाउको नाममा जातीय राज्यको आधारमा दे शलाई टुक्रा–टुक्रा पार्ने , दे शलाई कमजो र बनाउने उद्दे श्यले संघीयता भिœयाइएको छ । संघीयताको नाममा जातजातिको राज्य बनाउन थालियो भने हामी सधै भरि अशान्तिको भुमरीमा पछौर् ं । यो राष्ट्रले आर्थिक भार पनि थे ग्न सक्दै न । संघीयताको विकल्पमा गाउ“मा विके न्द्रीकरणको अधिकार लै जानुपर्छ भने र भन्दै आएका छौ ं । अर्काे कुरा संविधान कार्यान्वयनका लागि संघीयताको विषयमा फरक मत राख्दै चुनावमा गएका हौ ं ।
अन्त्यमा के ही छुटे का कुराहरु छन् ?
म राष्ट्रिय जनमो र्चाको प्रतिनिधि सभाको उम्मे दवार हु“ । गिलास चिन्हमा मतदान गरी विजय वनाउन आग्रह गर्दछु । मै ले कुनै पनि किसिमले अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, सौ दावाजी र गलत काम गर्ने छै न । गरे ं भने यहा“हरुले मलाई सार्वजनिकस् थलमा ल्याएर कारवाही गर्न सक्नुहुने छ भने र प्रतिबद्धता जाहे र गर्न चाहन्छु । सरकारबाट आएको बजे ट र मै ले पाएको तलव भत्तासमे त जनताको हितमा खर्च गर्ने छु । मै ले ले खे र दिन्छु, मलाई खान लाउनको दुःख छै न । मलाई एकमाना खान पुगे को छ । मै ले जितें भने आउने तलव, भत्तासमे त विकासमा लगाउने छु । दे उखुरीका जनतास“ग समग्र विकासको निम्ति मलाई विजयी बनाउन हार्दिक अनुरो ध गर्दछु ।
Previous: संविधान कार्यान्वयन र समृद्धिको लक्ष्य
Next: सुकुम्वासी वस्तीमा आएन चुनावी रौनक